Ringworm ပွေး - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ ယောကျာင်္းလေးပါခင်ဗျ. အသက်က ၃၁ ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ အရေပြားမှာပွေးတွေပေါက်နေလို့ပါ။ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်အရင်းတွေမှာပါဆရာ။ အခုတခြားနေရာတွေပါကူးလာလို့ပါ။ လက်တွေခြေထောက်တွေထိပါပေါက်လာလို့ပါ။ ဆေးခန်းပြတော့ခဏသက်သာပြီးပြန်ဖြစ်တာပဲဆရာ။ ဖြစ်နေတာ ၁ဝ နှစ်လောက်တော့ရှိနေပါပြီ။
၂။ ကျမ ချောင်းသာကပြန်လာကတည်းက တင်ပါးမှာ ပွေးကွက်တွေထွက်လာပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းပွားလာပါတယ်။ mico မိုက်ကိုဖန်ဆိုတဲ့ဆေးလူးပါတယ်။ မပျောက်ပါရှင့်။ တနှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ ဆရာဝန်မပြရဲပါရှင့်။ ဆေးသိရင် ညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ အသက်က ၂၇ ပါ။
ဟုတ့့် ဆရာဝန်ဖြစ်လို့ ပွေးဆေးသိပါတယ်။ အသက်ကိုနောက်ဆုံးမှရေးလို့ နှစ်ခါထပ်ဖတ်ရတယ်။ (ပီ) ကို (ပြီ) လို့နဲ့ (တစ်နှစ်) ကို (တနှစ်) လို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဆောရီး။
မိုးတောင်က ပွေးပေါင်ကလို့ အရပ်ခေါ်ခေါ်တဲ့ အရေပြားရောဂါကို ဆေးစာနဲ့ Ringworm အပြင် Dermatophytosis; Dermatophytid; Tinea လို့လဲခေါ်တယ်။ ဆေးစာအခေါ်လွဲနေတာက Worm ဆိုပေမဲ့ သန်ကောင်မဟုတ်ပါ။ Fungus ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုတမျိုးဖြစ်တယ်။
အဖြစ်များတယ်။ အရွယ်မရွေး၊ ကျား-မ မရွေးဖြစ်တယ်။ သူများကို ကူးလွယ်တယ်။ အတူနေတာ၊ အဝတ်အစား၊ ဘီး၊ ရေကူးကန်၊ တိရစ္ဆာန်တွေကနေ ကူးနိုင်တယ်။ မှိုပိုးရှိနေပြီး ကိုယ့်မှာ ပွေးကို မမြင်ရပေမဲ့ သူများကို ကူးစေနိုင်တယ်။ ယားမယ်၊ နီနေမယ်၊ အရေပြားအကောင်းထက် မြင့်နေမယ်၊ မီးလောင်ဖုလိုလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မန်းရည်လဲထွက်ချင် ထွက်နိုင်တယ်။ နုပ်ခမ်းသား တိတိကျကျရှိတယ်။ နီတာက ဘေးဘက်မှာ ပိုနီတယ်။ စက်ဝိုင်းလိုဖြစ်နေမယ်။ ဦးရေခွံမှာ ဖြစ်ရင် ဆံပင်ကျွတ်မယ်။ ခြေသည်း-လက်သည်းမှာဖြစ်ရင် ထူပြီး ပုံပြောင်းနေမယ်။ အမှောင်ခမ်းထဲမှာ အပြာရောင်မီးနဲ့ စမ်းတာကို Wood's lamp ခေါ်တယ်။ KOH exam စမ်းနည်း၊ Skin biopsy စမ်းနည်း နဲ့ Skin culture တွေလုပ်ပြီး သေခြာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ဖြစ်တဲ့နေရာကို ခြောက်သွေ့နေပါစေ။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို ဖိနေစေမဲ့ အဝတ်အစား မဝတ်ပါနဲ့။ အဝတ်အစားကို နေ့တိုင်း လျှော်ပါ။ Miconazole, Clotrimazole ဆေးတွေပါတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့လွယ်တဲ့ Antifungal powders, lotions, creams လိမ်းဆေး၊ ပေါင်ဒါ တခုခုသုံးနိုင်တယ်။ လိမ်းဆေးထဲမှာ Clotrimazole ပါတာတွေက (Cruex cream, Desenex cream, Lotrimin cream, lotion, and solution) ဖြစ်တယ်။ Miconazole ပါတာတွေက (Monistat-Derm cream), Ketoconazole (Nizoral cream) တွေဖြစ်တယ်။ Econazole (Spectazole) ဆေး၊ Naftifine (Naftin) နဲ့ Terbinafine (Lamisil cream and solution) တွေရှိတယ်။ ယားလို့ ကုပ်မိရာကနေ ဗက်တီးရီးယား ဝင်နေရင် Antibiotics ပိုးသေဆေး လိုနိုင်တယ်။ ဖြစ်တာမကြာသေးသူတွေ ပျောက်တာမြန်မယ်။ ကြာမှဆေးကုရင် ပျောက်တာ ကြာမယ်။ လိမ်းဆေးနဲ့ မပျောက်နိုင်သူတွေ၊ ဦးရေခွံနဲ့ ခြေသည်း-လက်သည်း ဖြစ်သူတွေက စားဆေးပါလိုတယ်။
Griseofulvin စားဆေးကို Dermonorm, Fluvin, Fungivin, Geovin, Gris O.D, GrisactinForte, Grisomed, Grisoral, Grisoral-OD, Grisovin-FP, Idifulfin, Nufulvin, Ulvin, Walavin-250, Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။ အသည်းမကောင်းရင် မပေးပါ။ လူကြီး 0.5-1 g/day ဆေးကို အစာနဲ့သောက်တာ ပိုကောင်းတယ်။ အရေပြားနဲ့ ဆံပင် = ၂-၈ ပတ်၊ လက်သည်း = ၆ လ၊ ခြေသည်း = ၁၂ လ။ Griseofulvin ဆေးကို Dermatophytosis အရေပြားရောဂါဖြစ်ရင် ကလေး ၁ နှစ်အထက် = 10 to 20 mg/kg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ (သို့) တဝက်ကို ၂ ခါခွဲတိုက်ပါ။ တနေ့မှာ 1000 mg/day ထက်မပိုစေရ။
Griseofulvin ကို Onychomycosis (Fingernail) လက်သည်းမှိုအတွက်
• Microsize formulation 1000 mg/day တနေ့ ၂-၄ ကြိမ်ခွဲပေးပါ။
• Ultramicrosize formulation 660 to 750 mg/day တနေ့ ၂-၄ ကြိမ်ခွဲပေးပါ။
Griseofulvin ကို Onychomycosis (Toenail) ခြေသည်းမှိုအတွက်
Griseofulvin ကို Tinea Pedis အားကစားသမားခြေထောက်မှိုအတွက်
• Microsize formulation 1000 mg/day တနေ့ ၂-၄ ကြိမ်ခွဲသောက်ပါ။
• Ultramicrosize formulation 660 to 750 mg/day တနေ့ ၂-၄ ကြိမ်ခွဲသောက်ပါ။
Griseofulvin ကို Tinea Barbae မိုတ်ဆိတ်မှိုအတွက်
• Microsize formulation 500 mg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
• Ultramicrosize formulation 330 to 375 mg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Griseofulvin ကို Tinea Capitis ဦးရေခွံမှိုအတွက်
Griseofulvin ကို Tinea Corporis ကိုယ်ခန္ဓာမှိုအတွက်
Griseofulvin ကို Tinea Cruris ပေါင်ခြံမှိုအတွက်
Griseofulvin ကို Dermatophytosis ကလေးမှို
• Microsize formulation: 1 year or older: 10 to 20 mg/kg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ 1000 mg/day ထက်မများစေရ။
• Greater than2years:5to 15 mg/kg/day တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ 750 mg/day ထက်မများစေရ။
Griseofulvin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ပါးစပ်အနာပေါက်၊ ရေငတ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ စိတ်ကျ၊ အိပ်မရ၊ အားယုတ်။ Pregnancy category C သတ်မှတ်ထားလို့ ကိုယ်ဝန်မှာမပေးရပါ။ လိမ်းဆေးတော့ လိမ်းလို့ ရပါမယ်။ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာတော့ တားထားတာမရှိပါ။ Clotrimazole ဆေးပါတဲ့လိမ်းဆေး (Cruex, Desenex, Lotrimin)၊ Miconazole ပါတဲ့လမ်းဆေး (Monistat-Derm) Ketoconazole ပါတဲ့ (Nizoral) နဲ့ and terbinafine ပါတဲ့ (Lamisil) ဆေးတွေကိုလိမ်းနိုင်တယ်။
Itraconazole ဆေးကို Biospore, Candistat, Canditral, Fulcover, Fungicap, Itaspor, Itra, Itrazen, Itrole, Sporanox နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး သိပ်မကောင်းသူတွေကို မပေးပါ။ Cisapride, Midazolam, Nisoldipine, Pimozide, Quinidine, Dofetilide, Triazolam, Levacetylmethadol ဆေးတွေနဲ့ တွဲမပေးပါ။
လူကြီး 100-200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ် (၂ တောင့်)။ ဆေးကို အစာမရှိချိန်သောက်ရတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဗိုက်နာ၊ အစားပျက်၊ ကိုယ်ရောင်၊ အားယုတ်၊ ကိုယ်ပူ၊ အနေရခက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ လိင်စိတ်နည်း၊ အိပ်ချင်၊ သွေးဖိအားတက်၊ သွေးထဲ ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်နည်း၊ ယောက်ျားပန်းညှိုး၊ အသည်းထိခိုက်။ နို့တိုက်မိခင်တွေ နို့ထဲမှာနည်းနည်းသာပါလို့ ကလေးအတွက်မစိုးရိမ်ရပါ။
Terbinafine ဆေးက စားဆေး၊ လိမ်းဆေးလာတယ်။
• Anibret Cream, Daskil Cream, Dermafine Cream, Exifine Cream, Fungotek Cream, Mecloma-T Cream, Mycofem Cream, Sebifin Cream, Tebina Cream, Tefdin Cream, Teraderm Cream, Terbee Cream, Terbest Cream, Terbicip Cream, Terbicrat Cream, Terbiderm Cream, Terbina Cream, Terbinyl Cream, Terbized Cream, Terbo Cream, Terfast Cream, Tinafine, Terbinid, Bifine, Derbina, Xtra, Befine, Mycoseal, Tyza Cream လိမ်းဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• Anibret Tab, Daskil Tab, Exifine Tab, Fin Tab, Fungotek Tab, Lamisil Tab, Phyte Tab, Sebifin Tab, Tebif Gel, Tebif Tab, Tebina Tab, Tebsil Tab, Tefdin-250 Tab, Teraderm Tab, Terbee Tab, Terbest Tab, Terbicip Tab, Terbized Tab, Terfast Tab, Terif Tab, Tyza Tab, Zimig Cream, Zimig Tab စားဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
လူကြီး Toenail- 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ 12 weeks ၃ လသောက်ပါ။ အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး ရတယ်။
လိမ်းဆေး Cream တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်။
Fluconazole လူကြီး 50-400 mg daily ပေးရတယ်။ ကင်ဆာ၊ AIDS အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းရောဂါ၊ အရက်စွဲရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်တွေမှာ သတိနဲ့ပေးမယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ ဗိုက်နာ၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာမကျေ၊ ခေါင်းမူး။
Tinea Corporis ကိုယ်မှာပေါက်တဲ့ပွေး
လိမ်းဆေးကို ဖြစ်နေတဲ့နေရာတခုလုံးအပြင် ဘေး ၂ စင်တီမီတာအထိ တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်။ အနည်းဆုံး ၂ ပါတ်။
1. Topical azoles ဆိုတာ Econazole, Ketoconazole, Clotrimazole, Miconazole, Oxiconazole, Sulconazole, Sertaconazole တွေဖြစ်တယ်။
2. Allylamines ဆိုတာ Naftifine, Terbinafine တွေဖြစ်တယ်။
3. Ciclopirox olamine ကိုလဲသုံးနိုင်တယ်။
1. Ketoconazole = 3-4 mg/kg/d ပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
2. Fluconazole = 50-100 mg/d or 150 mg တပါတ် ၁ ကြိမ်၊ ၂-၄ ပါတ်။
3. Itraconazole = 100 mg/d ၂ ပါတ်၊ (သို့) 200 mg/d ၁ ပါတ်။
4. Terbinafine = 250 mg/d ၂ ပါတ်။